MORMII MARSAA 3FFAA Irratti tarkaanfilee fudhataman -
MORMII MARSAA 3FFAA Irratti tarkaanfilee fudhataman
– Mormiin kun tooftaa mana oolu ( stay-at-home) ta’a. Kana jechuun
– Namni hundi mana isaa ooluun daandilee duwwaa godha
– Geejjibni ni dhaabbata
– Manneen daldalaa ni cufamu
– Hojiin waajjiraa hin jiraatu
– Mormiin guyyoota lamaa qofaaf tura ( Wiixataafi Kibxata)
– Raaw’ii mormii kanaa Qeerroon ni hordofa,hojiitti hiikamuu isaa mirkaneessa
Kana beekuun hawaasni keenya wantoota guyyoota lamaaniif isa barbaachisan ammumaan akka guuttatu dhaamsa dabrsina. Sochiin geejjibaa waan hin jiraanneef warri imaluuf karoora qaban amumarraa karoora isaanii akka sirreeffatan gprsina. Uggurri kun hojjattootaafi konkolaataalee tajaajila hawaasaa murteessoo ta’an kan akka hospitaalaafi awwaalchaa hin dabalatu.
Hubachiisa: raaw’iin mormii kanaa Qeerroodhan kan too’atamu ta’ee warra uuggura diigan irratti akkuma amma dura tarkaanfiin kan fudhatamu ta’uu asumaan isin beeksisuu feena.
Previous የኦሮሞ ህዝብ ከዚህ ብሄራዊ ውርደት መውጣት አለበት!
Next Jireenyi ilma namaa Hundi tokkoo laataa?